अनमोलकी प्रेमिकाले अनमोललाई के भनिन त्यस्तो ? चल्यो चर्चा माथि चर्चा आज्ञाले लेखिन मन छुने स्टाटस – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/अनमोलकी प्रेमिकाले अनमोललाई के भनिन त्यस्तो ? चल्यो चर्चा माथि चर्चा आज्ञाले लेखिन मन छुने स्टाटस
अनमोलकी प्रेमिकाले अनमोललाई के भनिन त्यस्तो ? चल्यो चर्चा माथि चर्चा आज्ञाले लेखिन मन छुने स्टाटस
काठमाडौ । फिल्म क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ विभिन्न गसिप बन्ने गर्छन । कलाकारहरु गसिपको कारण चर्चामा आउँछन् । कतिपय गसिप सहि सावित हुन्छन् भने कतिपय गसिपमै सिमित हुन्छन् । अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायक अनमोल केसीको प्रेम चर्चामा छ । उनको जुन फिल्ममा सहकार्य गरे उनै नायिकासंग नाम जोडिने गर्छ । तर उनले त्यसको प्रतिकृया दिन्नन् ।
उनको प्रेम ‘जेरी’ नायिका आना शर्मासँग रहेको बताइन्छ । तर, दुबैले सार्वजनिक रुपमा प्रेम स्विकार गरेका छैनन् । यसपछि, पनि विभिन्न नायिकासँग अनमोलको नाम जोडिएको छ । तर त्यस कुरालाई अनमोलले स्वीकार गरेका छैनन् । तर अनमोलको जन्मदिनका दिन एउटा क्लु फेला परेको छ जसवाट उनको प्रेमको आँकलन गर्न सकिन्छ । हुन त पछिल्लो समय अनमोलको नाम एक मोडलसँग जोडिएको हो । केही म्यूजिक भिडियो, विज्ञापन र छोटा चलचित्रमा काम गरेकी आज्ञा कारन्जितसँगको प्रेमको चर्चालाई उनले स्वीकार समेत गरेका छैनन् ।
तर उनले आज्ञालाई आफ्नो साथी मात्र भनेर प्रतिकृया दिएका छन् । अनमोलको यस्तो प्रतिकृयाका बीच आज्ञाले भने फरक संकेत गरेकी छन् । उनले प्रेमको संकेत गरेकी हुन् । आज्ञाले अनमोलको जन्मदिनको दिन यस्तो संकेत गरेकी छन् । उनले अनमोलसँगको विभिन्न तस्वीर पोष्ट गर्दै प्रेम ब्यक्त गरेकी छन् ।
अनमोलको जन्मदिनका दिनमा आज्ञाले ‘विशेष मान्छेको विशेष दिन’ भन्दै अनमोलसँगको तस्वीर पोष्ट गरेकी छन् । जसमा उनले लेखिन्–‘तिम्रो ठूलो दिन जती विशेष छ, त्यती नै विशेष तिमी मेरो लागि छौं, अकु ।’ अनमोललाई उनले ‘अकु’ भन्दै सम्बोधन गरेकी छन् । अनमोल र आज्ञा एकसाथ दार्जिलिङ समेत पुगेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । यसले पनि उनीहरुविच प्रेममा रहेको चर्चालाई मलजल पुगेको छ ।
गायक निशान भट्टराईले गरे कानुनी विवाह, को हुन् उनकी जीवनसंगिनी ?